Volkswagen Türkiye'deki Fabrika Kararını Erteledi | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ45 Manisaတူရကီအပေါ် Volkswagen ကစက်ရုံရွှေ့ဆိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်
16 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
အဆိုပါ Volkswagen ကစက်ရုံ turkiyede အတွက်ရွှေ့ဆိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်
ဂျာမန်စီးပွါးရေးသတင်းစာ၏ဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်များအရ Manisa သည်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင်စက်ရုံတစ်ခုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါစစ်ဆင်ရေးအနေဖြင့်တူရကီ၏အရှေ့ဘက်၌အဥဖရတ်ကစီစဉ်ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့စမ်းရေတွင်း, စစ်ဆင်ရေးရပ်တန့်ဖို့, သူတို့အစွမ်းကုန်လုပ်နေတာ, ယင်းဒေသ၏အကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအနောက်တိုင်းပြည်နယ်များ။
ဂျာမနီကားကုမ္ပဏီသည် Manisa တွင်စက်ရုံတစ်ခုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ကြောင်းအောက်တိုဘာလအစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဟုရိုက်တာသတင်းစာဂျာမန်စီးပွားရေးသတင်းစာ Handelsblatt ကဖော်ပြခဲ့သည်။
Volkswagen ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မည်သို့ဆိုစေစက်ရုံမှရွှေ့ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Volkswagen ရဲ့ Passat သူထိုသို့သောထိပ်တန်းအဖြစ် D ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်မော်ဒယ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တူရကီကို ရွေးချယ်. နှင့်သူသည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ထဲက back လိုကြောင်းပြောသည်။ အချို့သောအရေးကြီးသည့်ရင်းမြစ်များကစက်ရုံပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီအတွက်စက်ရုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Make မှဂျာမန်ကားကိုဧရာမ Volkswagen က 11 / 12 / 2018 ဂျာမန်ကားထုတ်လုပ်သူ Volkswagen က (VW တို့), တူရကီအတွက်အလုပ်နှစ်ပတ်လည်5တထောင်ကလူများကိုတစ်ဦးစက်ရုံထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ ဂျာမနီရှိ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများရှိလျှပ်စစ်မော်ဒယ်များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းပေးရန်ဂျာမနီသည်ကွဲပြားသောမော်ဒယ်များကိုယခုအချိန်အတန်ကြာရှာဖွေနေသည်။
, Gebze BPW အတွက်စက်ရုံဖွင့်လှစ်တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Continue မှ 27 / 08 / 2015 Gebze'de Fabrika Açan BPW ,Türkiye'deki Yatırımlarına Devam Edecek :Treyler aksı üretiminde, dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan BPW, 25 yılı aşan Türkiye serüvenini, yepyeni bir fabrika yatırımı ile taçlandırıyor. Türkiye…
တူရကီအတွက်ဧရာဂျာမန် Thyssenkrupp ဓါတ်လှေကားစက်ရုံဖွင့်လှစ် 09 / 05 / 2018 20 ယူရိုသန်း၏တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဂျာမန်ကုမ္ပဏီကြီး Thyssenkrupp ဓါတ်လှေကားရဲ့ပထမဦးဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတူရကီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုသို့သွားလေ၏။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတဝှမ်း၌ 7.7 ဘီလီယံယူရိုငွေကြေးလည်ပတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ TRNC အတွက်သင်္ဘောကယ်ဆယ်ရေးဆှဲသငျေ်ဘာရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု, အ Raising အရှေ့မြေထဲပင်လယ်၏ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည် 29 / 08 / 2019 ဝန်ကြီး Turhan၊ TRNC ပြည်သူ့လုပ်ငန်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးသည် Tugboat görevအားကယ်တင်ရန်ဇူလိုင်လငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ 20 ၏နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် Tolga Atakan နှင့်တွေ့ဆုံမှုမပြုမီ
Rize အတွက်စစ်ဆင်ရေး Stop ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားလိပ်စာ Gone 27 / 11 / 2014 Rize'deki Tüneli İnşaatında Çalışma Durdurma Kararı Yanlış Adrese Gitti :RİZE’nin İkizdere İlçesi Güneyce tünelinde 12 Kasım'da 1 işçinin hayatını kaybettiği,3işçinin yaralandığı göçük sonrası tünel inşaatında inceleme yapan ekipler,…
, Gebze BPW အတွက်စက်ရုံဖွင့်လှစ်တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Continue မှ
တူရကီအတွက်ဧရာဂျာမန် Thyssenkrupp ဓါတ်လှေကားစက်ရုံဖွင့်လှစ်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD နယူးBAŞKENTRAYစီမံကိန်းသည် JCC ဘုတ်အဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီမှန်ကန်သောအရေးယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်
စီမံကိန်းဖို့ GCC ဆုံးဖြတ်ချက်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီနယူးBAŞKENTRAYမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု
အညီတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်BAŞKENTRAY JCC စီမံကိန်း, ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်
တံတား didder ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေXnumx'ünc: 'အဆိုပါကင်းလွတ်ခွင့်ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ EIA ကို